5 Inta badan caan ku Waddooyinka In Paris Si Eeg | Save A tareenka
Home > safarka Europe > 5 Inta badan caan ku Waddooyinka In Paris Si Eeg
Waqtiga Akhriska: 4 daqiiqo(Last Updated On: 11/12/2020)
Waxaa jira waxyaabo badan oo loo jacaylka ku saabsan Paris. Xaggee baad xitaa bilaabaan, xaq u? Waxa ugu horreeya ee ku soo dhaca maskaxdooda yahay goobaha weyn sida Tower Eiffel iyo Louvre ah. Laakiin sababta aan sidoo kale la ogaado GEMS qarsoon magaalada? Ha noo bilaaban la 5 Inta badan caan ku Waddooyinka ee Paris si ay u arkaan!
Rail Transport waa ka ugu fiicaan deegaanka Jidka Si Travel iyo tani waa sababta thwaa maqaal la qoray si loo baro oo ku saabsan tareenka Travel oo waxaa looga dhigay by Save A tareenka, Ugu jaban in Tareenku Tigidhada Website In Adduunka.
1. Inta badan caan ku Waddooyinka In Paris Si Eeg: Avenue Victor Hugo
Avenue Victor Hugo waa waddo ah arrondissement 16aad ee Paris ka. laga bilaabo Charles de Gaulle (sidoo kale loo yaqaan Etoile ah) oo dhammaadkeedu Tattegrain (waddo noqday Henri Martin). Waxaa mid ka mid ah laba iyo toban ilaha bilaabo Etoile ah, iyo kan labaad ee ugu dheer laba iyo tobanka, ka dib markii waddada des Champs Elysees.
Magacaabay ka dib markii caanka Victor Hugo, kii maalmood ee ugu danbeysay qaatay Particulier Hotel. taalada A ee Hugo waxaa laga heli karaa isgoyska la waddo Henri Martin. Avenue Victor Hugo caan ku tahay cajiib ah naqshadaha u qurux badan oo waa kaamil for cabbayso caadi ah oo a weyn Instagram sawir! Samee garaam ah!
Fan of opera ah? Markaas wadada caanka this ee Paris waxaa loogu talagalay adiga! wadada Tani waxay hoy u tahay Tiyaatarka des Champs Elysees. opera waa guriga of laba orchestras weyn. Haddii aad haysato waqti dheeraad yar, waxaan xaqiiqo ku talinaynaa bixinta booqasho in this goobta waxqabadka taariikhi ah. Intaa waxaa dheer, waddo tani waxaa la ixtiraamo ay muhiimada u warshadaha fashion. noocyo badan oo caan ah ka heli kartaa halkaan oo ay ku jiraan vuitton, Loewe, Celine, iyo in ka badan.
3. Inta badan caan ku Waddooyinka In Paris Si Eeg: Rue De Rivoli
Ready si aad u hesho qalbiga Paris galay? Markaas jidka this loo baahan yahay in aad liiska 5 Inta badan waddooyinka caanka ah ee Paris! Tani waxay dadku ku, wadada firfircoon waddaa dhexe ee Paris, siman tahay reebin webiga. Magacaabay ka dib markii ay guulo hore Napoleon ee dagaalka Rivoli, this Boulevard qurux badan hoy u ah Louvre iyo Janno Tuileries ah. Royal Palace, kaliya ee soo socota si ay Louvre, waa meel kaamil ah inay ku raaxaystaan ​​maalintaas ka soo baxay beero taarikhiga ah. Tani waa wadada ugu fiican haddii aad rabto in aad ku qaadi bidhaamaysa dhinaca jir laandheere of Paris. Ha ka maqnaan!
4. marinnada balbalada
Qaadashada bixitaanka kooban ka kaguuraya weyn in ay xukumaan inta badan ee Paris ugu muhiimsan iyada oo carwooyinka, Curisyada Couverts waa wado kale oo ka raaxo. Kuwani luuqyo daboolay adeeganayay u samaysaa tuuryo heer sare ah iyada oo loo marayo magaalada. Waxaad ka heli kartaa meheradaha quaint, pubs, iyo shopping la awoodi karo. Ma aha oo kaliya in, laakiin naqshadda dhismaha ah ee ka mid ah luuq luuqyada daboolan gabi ahaanba waa qurux sidaas ha u seegi!
Gagada Diyaaradaha Lyon ilaa Tareenada Avignon
5. Inta badan caan ku Waddooyinka In Paris Si Eeg: Boulevard De Clichy
Montmartre at hal dhibic ayaa waxaa loo arkaa in ay abaabulan lagu for badnaa farshaxanka Paris ee. Nasiib darro, qiimaha sare oo sabab u ah dalxiiska u kexeeyey oo inta badan fanaaniinta galay xaafado kala duwan. Halkaas waxaad ka heli kartaa Boulevard de Clichy oo hoy u ah Moulin Rouge iyo Paris light-light district. Waxaad ka heli doontaa cawayska iyo a ma m waqti wanaagsanatter wakhtiga maalintii aad doorato in aad booqasho. Tixgeli booqanaya Rouge Moulin fiirinaya waxqabadka cabaret a!
Ku rid on labada ciyaaryahan aad ugu jeceshahay of kabo socod, iyo si aad u Paris inay soo aragto 5 Inta badan waddooyinka caanka ah ee Paris! Ma u baahan tahay gaadiid? Moodayay in aad marnaba ku weydiin lahaa! Midhadh tigidh ka Save A tareenka, hadda. You can book in seconds with no extra or hidden fees.
Ma rabtaa in aad Cudarada our post blog “5 Inta badan caan ku Waddooyinka In Paris Si Eeg” gal your site? Waxaad ka qaadi kartaa sawiro iyo qoraal iyo na siiso credit la link a si post blog this. Ama guji halkan: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Ffamous-streets-paris%2F የሰማይ አካላት- (wax yar hoos si aad u aragto Code Cudarada ah)
#beautifulstreets europetravel longtrainjourneys trainjourney talooyin tareenka travelfrance travelparis